China Umgangatho ophezulu we-kn95 ubuso beemaski eziphambili ze-KN95 zokuphefumla abaphefumli bokuphefumla kunye nabathengisi | Unyango lwe-AKF
I-Shun Health kunye neTekhnoloji yezoNyango Co, Ltd esekwe ngo-2015.
Singumenzi wobuchwephesha kunye nelithumela ngaphandle iimveliso ezilahlwayo ezingalukwanga kunye neemveliso zeplastiki.Zonke iimveliso zethu eziveliswe phantsi kweemfuno ze-CE. Sinoluhlu olubanzi lweemveliso ezilahlwayo kubandakanya imaski yobuso. I-AKF izinikele ukudibanisa itekhnoloji kunye nemveliso, ukuqhubeka kophuhliso lweemveliso ezintsha.Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuba sibe liqabane lakho elilungileyo kwishishini elinomgangatho ogqwesileyo, ixabiso elifanelekileyo kunye negama elihle. Wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu. Besihleli sineenkolelo ezizinzileyo njengeNtembeko, umgangatho weMveliso, amaxabiso okhuphiswano, inkonzo engenakulinganiswa。
Imeko-bume yeMveliso yeFactory-Igumbi elicacileyo le-10,0000;
Ulawulo loMgangatho we-2 -Uvunywe yi-ISO 9001: 2008`
Umgangatho weemveliso ze-3 -U kuvunywa yi-ISO 9001: 2008`Isatifikethi seMveliso-Uhlobo lwe-4/5/6 lwe-coverall, iNgxelo kaNelson yemaski yobuso, njl.
4.Product Capacity - 10 * 40HQ ngenyanga nganyeKumaqabane ethu sele,
Kubathengi bexesha elizayo, siyakumema ngokufudumeleyo ukuba ujoyine iqela lethu kwaye ukhule ube mkhulu emva koko, wamkelekile!
Egqithileyo Ukhuseleko lobuqu lweKN95 iMask GB2626 Enokuphinda isongelwe yokuphefumla umoya ngokulahlwayo i-kn95 yobuso kunye nexabiso lomoya
Okulandelayo: Iiglavu ezilahlwayo zilahlwe Latex Ukucoca Ukutya Iziqhano
Kukhuseleko Personal KN95 Vuvu GB2626 enamavili A ...